Terbaik Dari Ust Hadi: Zaman Firaun Dulu Pun Ada BR1M
ကြံ့ဖွံ့တွေ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုပြီး အထိကရုဏ်းတွေ ကြံစီဖန်တီး
Avoid These If You Want to be Smart
Ten Flat Belly Tricks
Siri Bercakap Dengan Miki – Syafinas Muka Kosong
နေရပ်စွန့်ခွာ၍ တတိယနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာနေကြသူများ အကြောင်း နိုင်ငံအကြီးအကဲများသို့ တင်ပြသည့် စာတမ်း
Posted: 25 Feb 2013 08:17 AM PST
For me, the eyes revealalot. I would never trust anyone who does not look at me in the eye when talking to me, and would definitely stay away from those who look the other way. Such body language speak volumes. Yet, it is also easy to fall in love with someone who has beautiful brown eyes. I think the most telling part of man is our eyes. That is for sure.
Posted: 25 Feb 2013 08:22 AM PST
Let's apply some logic and arguments to the 10-point general election manifesto announced by Pakatan Rakyat yesterday. My argument in red.
1. Shutting down the Lynas plant - as part of the coalition's environmental sustainability policy, Pakatan pledges to stop the Lynas rare earth refinery in Gebeng, Pahang.
(Once they formagovernment, they will have to compensate Lynas Australia for such an action, and it will not going to be cheap. 'Environmentalist, they are, PR should also shut down all coal-based power station i.e the one in Kapar and investafew billion ringgit for hydro-based turbines. All plans foranuclear-based power generation will be jettisoned, leaving Malaysia lagging behind other developing nations in that area).
2. Abolishing the AES - Pakatan argues that the automated enforcement system (AES) for traffic offences has endangered lives and enriched cronies, and thus will be immediately stopped.
(What nonsense! If we dont come down hard on traffic offenders by not issuing any summon and producing them to court, our roads will be like race tracks. Educating the users takealot of time and money. May as well PR takes off the speed limit on all roads and see whether the number of accident and casualty takeadive or multiply).
3. Putting the brakes on healthcare tax - Pakatan promises to provide free basic healthcare and thus will stop longstanding plans to introduceahealthcare tax.
(Crap! There is no such thing as free basic healthcare in most countries, unless each and every Malaysian subscribes to medical insurance, which still requires you to pay for the premium. This idea would see all healthcare product manufacturers leaving the country. BN government has been subsidizing much on healthcare for the rakyat. However,afree basic treatment will also lead to the private hospitals and clinics close shop. Who will bear the cost as the subsidy is already eating almost 15 per cent of the government's pocket. Stupid idea!)
4. Promoting media freedom - The coalition says it will abolish all legislation that restrict media freedom, including the Printing Presses and Publications Act 1984 (PPPA).
(OMG! Then Anwar, Kit Siang, Karpal, Nik Aziz and the rest must bear all consequences should racial and religious divide take to the media by extreme. Any backlash will augur well in bringing the whole country down. If The Star comes up withapage-1 headline that reads, "Anwar the motherfucker" or Utusan's "Pelir Nik Aziz lemah", it will also bring about 'positive' result in educating our present and future generations about our new culture).
5. Freeing all ISA detainees.
(Brilliant! Forgive them and repeal all laws that had helped kept the nation stable and peace since Independence. Close down most of the existing prisons and replace them with special housing project for the detainees, give them good jobs and other perks. As we cannot tell the public to accept rapists, subversive agents, drug dealers, armed robbers, black money dwellers and murderers, PR government will engage them. Should someone is proven to pose danger to our stability, apply reverse-psychology by giving thematop post somewhere in the government).
6. Affordable housing - Pakatan says it will build 150,000 affordable homes in the low-cost category (below RM75,000) and medium-cost category (below RM250,000) within its first term.
(As BN has already proven its word in this area, perhaps PR can offerahouse at RM25,000 and below, including in the urban areas. As part of their 'Negara Kebajikan', its better to give it free to those in need of houses. No need to pay for the contractors as they can submit to PAS' amal jariah concept, whether they are Malays, Chinese or Indians. PR government will have to spend billions of ringgit to open up new downstream industries for the housing sector i.e cement, tiles, roofing etc. They may also train the ex-ISA detainees and school dropouts for the job, at RM100 per hour).
7. Policing - To deal with rising crime, Pakatan says it will reallocate human resources to increase the size of the Criminal Investigation Department by reducing the General Operations Force and other non-core task personnel.
(Why not task them with general works, as rubber tappers or palm oil plucker. Since PR is so convinced that crime rate will stand at almost NIL during its administration, better reclassify those in the police and armed forces. They can help our fishermen and those in the plantation sector. No need to patrol the streets as nobody would want to indulge in any form of major crimes, especially under PAS hudud.)
8. Free education, abolishing PTPTN - Describing education as the people's right and the government's responsibility, Pakatan says its administration will bear tertiary education fees and subsidise fees in private institutions.
(Fine enough! All will get free education, scholarship for overseas study and other benefits. We don't have to encourage our kids to study hard as each and everyone of them will getagood job even though they flop in their final exam. We will notice what kind of undergraduates and graduates we produce when we feed them with everything free. Pakatan must have plenty of money for all these dream. Wonder if Anwar's friends in the US, Britain, Australia, Singapore and Israel were given free education and full scholarship. So, our students will not have to compete against each other asagrade3university graduate can easily becomeasurgeon or architect or engineer. Just wait for their job result! I don't think Anwar or Karpal dare to engage suchasurgeon or engineer!)
9. Lowering fuel, electricity and water charges - Pakatan's manifesto argues that the country's oil revenue should be shared with the people in the form of cheaper fuel prices.
(I second the notion! Pakatan will have to down-structure the salary of those working in the sectors, ensuring that all households and industries get to pay minimum bill every month. But why not for free under its 'Negara Kebajikan' concept? The National Grid must be revised as not to trip frequently due to lack of supervision (over low pay) and regular check. TNB will eventually has to close shop over multiple losses and industrial action by its workers. Petronas, on the other hand will have to rely on its overseas investment for profit. Water? If Selangor and Kelantan are not able to solve the water issue, how are they going to manage the national supply?)
10. Reducing foreign workers by 1 million - Pakatan said it will introducea'comprehensive package' to ensure the removal of one million foreign workers within five years to allow locals to take up the jobs.
(Hahahahaha! Not even foreign workers would leave the 'Welfare State', most locals too will opt for jobs overseas. When the inflow of FDIs comes toahalt due to the impracticality of PR policy, the country will have to go back to where it once belonged -afully agricultural-based economy. But still, its okay as it will make us self-sufficient in many aspects. However, instead of 'sending off' the foreigners, its wise for PR to utilise them. Give them PR or citizenship, just like what Anwar did in the 1992 IC Project in Sabah. Hope he remembers!)
What else? The manifesto was based on 'moral value' and 'universal principle'.
Whose moral was it based-on? Anwar? Nik Aziz or Lim Kit Siang?
Posted: 25 Feb 2013 09:07 AM PST
Pemberian "one-off" seperti Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) oleh kerajaan Umno-BN akan melahirkan budaya mengemis dan mengajar rakyat untuk patuh kepada pemimpin walaupun mereka zalim dan menekan rakyat.
Malah, kata Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang, "pemberian BR1M" juga dijalankan pada zaman dahulu ketika pemerintahan Firaun yang zalim dan ditentang Nabi Musa.
"Zaman Firaun dulu pun ada BR1M," kata Abdul Hadi, sambil senyum.
"Firaun memberi duit tapi menyekat rakyat. Dia kerahkan kaumnya dan dikumpulkan di satu tempat.
"Kemudian dia memberi ucapan bahawa projek yang disalurkan kepada rakyat adalah projeknya. Firaun menjadikan rakyat ringan akal," kata Abdul Hadi di dalam ucapannya di konvesyen Pakatan Rakyat di sini hari ini.
"Kita mahu ajar rakyat agar dimampukan dan bukan rakyat jadi pengemis. Maka dengan Buku Jingga kita mampu laksanakan konsep rakyat dimampukan."
"Kamu (rakyat) bukan ayam, itik, tapi kamu manusia.Jika diberi dedak atau hampas kelapa kita (rakyat) beri makan ayam. Lepas itu kita makan ayam itu balik," katanya.
၂၀၁၅ မတိုင်ခင်မှာကို ကြံ့ဖွံ့တွေ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုပြီး အထိကရုဏ်းတွေ ကြံစီဖန်တီးလာနေပါပြီ၊
ပြီးခဲ့တဲ့ ရခိုင်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ပြန်ကြည့်ရင် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော လုပ်မဲ့သဘောရှိတယ်။
Online မှာ စနစ်တကျ ဘာသာ၊လူမျိုးအထိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖွဲ့စည်းလှုံဆော်နေတဲ့ အုပ်စုတွေရှိနေပါတယ်၊
နီးစပ်ရာ လူမှုရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွေဆီ အကြောင်းကြားဟန့်တားကြပါ။
Source: FB of Lu Cifer
အရှင်ဝီရသူရဲ့ တရားခွေတွေကို စုပြီး ခွေကူးခိုင်းပါတယ် သာကေတ မာန်ပြေမှာ သွားဝေ
မယ်လို့ ပြောပါတယ် ……. ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်
လုပ်တဲ့ သူက ရပ်ကွက်အုပ်ရေးမှုး (ကြံခိုင်ရေး) တယောက်ပါ
စဉ်းစားကြည့်ကြပါ…… လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အထိမခံတဲ့ ကိစတွေကို
ဘယ်လိုလူတွေက ဦးဆောင်နေသလဲဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။
၉၆၉ စတေကာတွေကို လိုက်ဝေနေပါတယ်
ခွေတွေကို လည်း လိုက်ဝေနေပါတယ်
စာရွက်တွေကို လည်း လိုက်ဝေနေပါတယ်
ကျွန်တေ်ာ သဘောကတော့ ပြဿနာတခုကို ပြေပြေလည်လည်ပဲ ဖြေရှင်းစေချင်ပါတယ်
ဒီလိုကြီး ၀ါးလုံးချီးသုတ် ရမ်းနေတာတော့ သဘောမကျပါ။
(Credit to Chan Myae)
Posted: 25 Feb 2013 06:22 AM PST
"Ia ternyata bukan sekadar retorik, tapi ada implikasinya," kata Ghafir. -KD
Posted: 25 Feb 2013 03:12 AM PST
COMMENT I am referring to the statement by Home Minister Hishammuddin Hussein that he has left it to Wisma Putra on the Phillipine's government request of an extension on the deportation of the Lahad Datu intruders.This gives Foreign Minister Anifah Aman an absolute authority to decide on the matter. I am not questioning the noble and sincere intention of any party to have this standoff brought to an immediate end and free of bloodshed as long as they are done within the framework of our laws.
A standoff is stillastandoff whether it is an Al-Maunah standoff oraLahad Datu standoff. It cannot be dealth with differently. The weapons smuggled in by the Sulu invaders are no less lethal than the weapons stolen from the 304 army camp by the Al-Maunah group. The Al-Maunah group's members are no less Muslims than the Sulu invaders if religion is to be considered. If the Al-Maunah gang members who surrendered were charged with waging war against the Yang di-Pertuan Agong andafew of them hanged, so must the same charges be preferred against the Sulu intruders when they surrender.
As such Anifah must be advised that he has no powers to promise or agree with the Phillipines government to deport all those intruders whether individually armed or not, without all of them being brought to face the full brunt of our laws, first. With due respect to Anifah, it is not within his purview to decide whether an act is criminal in nature or otherwise or whether the intruders should be charged in court or just let them go scot-free. Neither it is Hishammuddin's.
In the event Anifah is adamant in conceding to the Phillipinesa"blanket deportation" of all the armed intruders to their homeland with the concurrence of Prime Minister Najib Abdul Razak, for any reasons whatsoever, without going through the due process of our laws and constitution, then not only both of them have madealandmark decision arbitrarily but they will be settingavery dangerous and vicious precedent.
Posted: 25 Feb 2013 01:04 AM PST
Posted: 25 Feb 2013 12:30 AM PST
There are food that increases your intelligence by helping the brain to function better. There are also food that decreases your intelligence. If you want to be smart and if you are working on making yourself even smarter, do not eat (or at least try to avoid eating them often) the food listed below.
Fast food - Everyone loves to eat quickly these days, but little they know that while eating quickly they are also damaging their brain rather quickly. There are so many researches that show results of fast food affecting the brain in the worst possible way.
Highly Salted food - Forget about your heart because any food that has high amount of salt is pretty bad for your brain as well. With high level of sodium high salted foods can cause some major brain issues.
Processed food - Stay away from any such product that has artificial additives because they may include hundreds of chemicals that could harm our brain in more than one way.
All these foods one way or another are bad for your brain, stay healthy and stick to the natural foods and maintainahealthy diet.
Posted: 24 Feb 2013 11:53 PM PST
With all the resting and feasting, I put on5pounds during the CNY celebrations. Time to knock off that weight and to dream ofaflat belly all over again!
CLICK HERE for ten flat belly tricks.
Posted: 21 Feb 2013 04:34 AM PST
Posted: 24 Feb 2013 08:34 PM PST
The excitement (and tension) level in our home has quadrupled significantly since Miki started schooling. Every day he has stories to tell, new zikir and doa to recite etc. Sometimes, he blurt out the names of his friends and teachers for no reason at all. Like tengah –tengah makan.. tiba-tiba "NAUFAL IMAN!!". Tengah-tengah layan Ipad tiba-tiba "TEACHER AFNI!!".
Eh..eh… Ni baru betul meroyan.
Yesterday Miki overheard my friend– Anez's name while I chatted with Azman and told us he too hasafriend named Anis. Anis Melissa (not her real name). There is also another girl in the class and her name is Syafinas (also not her real name).
Mummy Miki pun tanya soalan tak agak-agak. "Anis Zurina dengan Syafinas siapa lagi cute, Miki?"
Miki shyly answered "Syafinas…"
"Syafinas dengan Sarah siapa lagi comel?" I asked again. Sarah is his cousin in Penang.
"Sama comel…." He said. "Mummy tahu??" Tiba-tiba Miki cerita bersemangat, "Syafinas tu muka dia kosong!! Kosong betul! Muka dia takde apa-apa… kosong aje……"
"Muka kosong tu camana?" I didn't understand. Ko biar betul Miki, teacher dengan budak-budak lain nampak tak si Syafinas ni? Ke ko sorang je nampak dia?
"Muka dia macam kosong la… Macam takde apa-apa….."
"Muka Mummy kosong tak?"
"Hmmmm…." He said while he came close and studied my face.. "Kosong jugak tapi ada ni!!" Miki pointed at my PARUT JERAWAT! *pitam*
So now I understand that muka kosong is actuallyavery flawless complexion. Hmmm… Tinggi taste ko Miki, awek comel nak yang flawless ajer… Haish!
"Tapi kan Mummy," he continued "Syafinas tu cakap tak keluar suara! Tak dengar langsung dia cakap apa… Baca ABC ke doa ke apa semua tak keluar suara!" Hai dah flawless bisu pulak ke?
"Dia shy tu Miki…. "I explained.
"Tak… dia cakap dengan kawan dia je. Dengan teacher dia takut. Lagipun dia tak pandai sangat…" kata Miki lalu berjalan pergi.
Wahai Miki anakku, di dalam dunia ini ada ramai perempuan. Ada yang sangat cantik mempersonakan. Ada yang baik budi pekerti ada yang jahat macam setan. Tapi kalau yang muka cantik, kulit kosong licin, tapi kurang tahap kecerdikkan, ini kita namakanbto the i to the m to thebto the o. BIMBO.
Ok, itu saja pesanan Mummy untuk hari ini! Bye baby! Mummy loves you! Muah!
Posted: 24 Feb 2013 07:55 PM PST
မြန်မာ့အခက် ၊ တရုတ်အချက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၃ M-Media source: www.nytimes.com
မြန်မာပြည်ဘော်ဒါအနီးတွင် တရုတ်စစ်တပ်က အပြင်းစားစစ်ရေးလေ့ကျင့် မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ယင်းသို့ပြုလုပ်နေခြင်းမှာ တရုတ်ပြည် အနောက်တောင် ဘက်သို့ မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အရှိန် ၀င်ရောက်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်ပြည်၏ တရားဝင် သတင်းမီဒီယာများ က သောကြာနေ့ တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
တရုတ်စစ်တပ်သည် မြန်မာမြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်နှင့် နယ်စပ်ဖြစ်သော ယူနန်ပြည်နယ် တွင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်လျက်ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တွင် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ကေအိုင်အေတို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသလို ဒီဇင်ဘာလ နှောင်းပိုင်းက တိုက်ပွဲအရှိန် မှာ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျည်ဆံအခွံများမှာ တရုတ်ပြည်တွင်း သို့ ကျရောက် လျက်ပြီး ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကလည်း ယူနန်ပြည် နယ်အတွင်း ရှိ ဆွေမျိုးများ သို့မဟုတ် ဟိုတယ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြကြောင်း တရုတ်တာဝန်ရှိသူ များနှင့် သတင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြသည်။
လွန်ခဲ့သည့်လက မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်မှ ကေအိုင်အေနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ကြေညာခဲ့ပြီး နောက်နေ့များတွင်မူ မြန်မာ စစ်တပ် က ဆက်လက် တိုက်ခိုက် ခဲ့ခြင်းမျိုး ရှိသည်ဟု ကချင်ပြည် နယ်ရောက် နိုင်ငံခြားသားများ က သတင်းပေးကြသည်။ သောကြာနေ့ကမူ တရုတ်သတင်းမီဒီယာတစ်ခု က မြန်မာအစိုး ရနှင့် ကေအိုင်အေတို့ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု များရှိသော်လည်း ထိရောက်သည့် တိုးတက်မှုတစုံတရာမတွေ့ ရကြောင်း ပြောကြားသည်။
တရုတ်တို့ ယူနန်တွင် ယခုကဲ့သို့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရခြင်းမှာ တရုတ်စစ်တပ်အနေဖြင့် စစ်ပွဲများတွင် တိုက်ခိုက်နိုင်စေရန်နှင့် အောင်မြင်မှုများရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ကြာသပတေးနေ့က ဖော်ပြသည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအပြီး ယခုလအတွင်း စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအစောင့်များကို တိုက်ပွဲငယ်များအတွက် အဓိက လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် ရည်မှန်းကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်းက ဖော်ပြသည်။ တရုတ်စစ်တပ်များကို ဆိုးဝါးလှသည့် ရာသီဥတုအတွင်း ချီတက်နိုင်ဖို့နှင့် မမြင်ရသည့်အနေအထားများတွင် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယူနန်ပြည်နယ်တွင် တောင်ကုန်းထူထပ်သဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိနေကြောင်း၊ တရုတ်စစ်တပ်ကို တောထဲ၊ လျှိုမြှောင်များနှင့် ရေထဲတွင်ပါ တိုက်ခိုက်နိုင် ဖို့ လေ့ကျင့်နေကြောင်း၊ အချို့တပ်များ ကမူ မြန်မာ နယ်နိမိတ်အနီးတွင် ဆက်သွယ်ရေးစခန်းငယ်များ တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း အချို့သော သတင်းအရင်းအမြစ်များအရ သိရသည်။
အစောပိုင်းကမူ ယူနန်ပြည်နယ် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပြည်နယ်အတွင်း၌ ကွပ်ကဲအမိန့်ပေးနိုင်သည့် စင်တာတစ်ခုကို တည်ပြီးဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။ ဇန်န၀ါရီလကမူ တရုတ်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ၏ သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သော People's Daily ကမူ မြန်မာနယ်စပ်ရှိ နဘန်းမြို့ တလျှောက် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်များနှင့် ရဲအရာရှိများအား မြို့နေပြည်သူများအား မှတ်ပုံတင်ကဒ် (ID Cards) များစစ်ဆေးနေခြင်းကို တွေ့ရှိ ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ မြို့ထဲတွင်မူ ဆက်သွယ်ရေးရပ်ဆိုင်းသွားသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်း ရပ်ဆိုင်းနေကြောင်း၊ ညဘက်များတွင် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်သံ များကို ကြားနေရကြောင်းဖြင့်လည်း ယင်းသတင်းစာက ဖော်ပြသည်။
တရုတ်ခေါင်းဆောင်များကမူ တရုတ်စစ်တပ်အား တိုက်ခိုက်ရည်မြင့်မားလာစေဖို့နှင့် အင်အားတောင့်တင်းသော ခေတ်မီစစ်တပ်အဖြစ် ဆထက်တပိုး တိုးတက်လာစေဖို့ အာရုံထားလျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့ သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းအတွင်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်သစ် ဆိကျင်းပင် (Xi Jinping) က တရုတ်တောင်ပိုင်းရှိ ခြေလျင်နှင့် ရေတပ်များသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ် အင်အားမြင့် မားစေဖို့ လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကချင်ကေအိုင်အေတို့သည် ကေအိုင်အေ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ရှိ လိုင်ဇာမြို့ကို ဗဟိုပြု၍ တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ် သည်။ ယခုနှစ် ဆောင်းရာသီက မြန်မာစစ်တပ်က လိုင်ဇာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ သို့မဟုတ် လိုင်ဇာတ၀ိုက်ရှိ စစ်အရေးအရ ဗျူဟာကျသောနေရာများသိမ်း ဖို့ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်တပ်တွင် ဖိုက်တာဂျက်လေယာဉ်များ၊ လက်နက်ကြီးများပါ ၀င်ကြောင်း၊ အရပ်သားများလည်း သေဆုံး ရကြောင်းဖြင့် ဒေသခံများက ဆိုသည်။
မိမိတို့ဘက်သို့ ကျည်ဆံခွံများကျရောက်နေကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ အထိ ကျည်ဆံခွံလေးခုအထိ ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်ကဆိုသည်။ ထို့ပြင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အရေအတွက်များပြားလာခြင်းကို လည်း တရုတ်ဘက်က စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကချင်ကေအိုင်အေတို့ တိုက်ပွဲကြောင့် ၂၀၁၁ မှစတင်၍ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ ယူနန်ပြည်နယ်တွင်း ၀င်ရောက်လျက်ရှိနေသည်။ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အများစုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး တရုတ်ခရစ်ယာန်များက သူတို့ကို လိုအပ်သည်များ ကူညီသလို တရုတ်ပြည်တွင်းရှိ ကချင်များကလည်း ကူညီကြသည်။
Posted: 24 Feb 2013 07:13 PM PST
M-Media : နေရပ်စွန့်ခွာ၍ တတိယနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာနေကြသူများ အကြောင်း နိုင်ငံအကြီးအကဲများသို့ တင်ပြသည့် စာတမ်း
စာတမ်းပြုစုသူမှာ ဦးမျိုးမြင့်ဖြစ်ပြီး စာတမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အခန်းအလိုက် ခေါင်းစဉ်များမှာ
၁။ ထိပ်တုံးခတ်ခံထားရသော ပြည်သူများ
၂။ တတိယနိုင်ငံသို့ ခိုးထွက်သည့် လမ်းကြောင်း(၈)ခု (အောက်လမ်းများ)
(က) ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ကုန်းလမ်းများမှနေရပ် စွန့်ထွက်ခွာခြင်း
(ခ) ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းသို့ နေရပ်စွန့်ခွာခြင်း
(ဂ) ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေလမ်းဖြင့် နေရပ်စွန့်ခွာခြင်း
(ဃ)မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် နေရပ်စွန့်ခွာခြင်း
(င) မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရေလမ်းမှ စက်လှေဖြင့်နေရပ်စွန့်ခွာခြင်း
(စ) ဂူအန်ကျွန်းသို့ ကုန်းလမ်းဖြင့် တတိယနိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ထွက်ခွာခြင်း
(ဆ)အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုန်းလမ်းဖြင့် တတိယနိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ထွက်ခွာခြင်း
(ဇ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကုန်းလမ်းမှတစ်ဆင့် တတိယနိုင်ငံများသို့ နေရပ်စွန့်ထွက်ခွာခြင်း
၄။ တိရစ္ဆာန်သန်းခေါင်းစာရင်း ကြားဖူးပါသလား
၅။ မတရားသော အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရတင်ပြကြ
၆။ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု ဟုတ်မဟုတ်သုံးသပ်ပေးပါ
၇။ လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှု ဟုတ်မဟုတ် သုံးသပ်ပေးပါ
၈။ လဝကအရာရှိများတွင် ဘယ်လူမျိုးရာခိုင်နုန်းအများဆုံးလဲ
၉။ ခွေးလူမျိုးဟုသာ ခေါ်ပါတော့
၁၀။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်၍ လူသတ်၊ မီးရှို့ရန် အမိန့်ပေးဦးဆောင် နေသည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေ
၁၁။ ယုတ်ညံ့၍ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သော ဘွဲ့လက်မှတ်
၁၃။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကော်မရှင်
၁၄။ သတ်ဖြတ်သူနှင့် အသတ်ခံရသူ ကွဲကွဲပြားပြား သိစေလိုပါသည်
၁၅။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ရွာများ၊ ရပ်ကွက်များ၊ အကြမ်းဖက်များ၏ အဝိုင်းခံရသည့်အခါတိုင်း အကူအညီတောင်းခံခဲ့သော်လည်း အကူအညီမရ
၁၆။ ဒေါက်ဖြုတ်ခံ ကော်မရှင်လူကြီးနှစ်ဦး
၁၇။ လှေစီးပြေး နေရပ်စွန့်ခွာဒုက္ခသည်များကို အပြစ်မယူတော့
၁၈။ ကျောင်းပိတ်၍အိမ်အပြန်လူငယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနယ်ကျော်မှုဖြင့် ထောင်နန်းစံနေရ
၁၉။ ၆ နှစ်နှင့် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးနှစ်ဦးအား အတင်းအဓမ္မရခိုင်သို့ ပို့ရန် ခြိမ်းခြောက်
၂၀။ အမိန့်ရမှလက်ထပ်ခွင့်ရ လက်ထပ်ခွင့်၊ ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံ
ပူးတွဲ (၁) ယုတ်ညံ့၍ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သော ဘွဲ့လက်မှတ်
ပူးတွဲ (၂) ရခိုင်ပြည်မှ အပြန်ခရီးသွားပုံစံ
ပူးတွဲ (၃) ရခိုင်ဒေသတွင်းနေထိုင်သူများ နယ်ကျော်ခရီးထွက်ခွင့်ပုံစံ
ပူးတွဲ (၄) အသေအပျောက်စာရင်း
File DownLoad ယူရန်
Google Doc =>https://docs.google.com/file/d/0B1Nc1yYXgtogeXY5YVU2RlBqYVE/edit
Posted: 24 Feb 2013 06:43 PM PST
Posted: 24 Feb 2013 06:58 PM PST
Posted: 24 Feb 2013 04:00 PM PST
BBC ONLINE 15 February 2013
Moses Murandu, from Zimbabwe, grew up watching his father